News36media, Author at News36media - Page2of 241
श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमानसंग किन नजिक हुन्छन त जब आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरु कै श्रीमान संग सल्किने गरेको देख्न पाइन्छ बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमानहरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग सल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ । सबैलाइ त्यसो भन्न मिल्दैन तर खासगरी श्रीमान विदेश हुने महिलाहरु अर्कै पुरुष संग मो’ज म’स्ती गरि श्रीमान ले विदेशमा दुःख गरि […]
काठमाडौ । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको घटनामा उनको प्रेमिका भनिएकी रिया चर्कवर्ती छानविनका लागि २८ दिन हिरासतमा बसेर छुटेकी छन् । सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको घटनालाई ड्र ग्स कनेक्सनसंग जोडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । उनी ड्र ग्स मामिलामा हिरासतमा पुगेकी हुन् । त्यहाँ छँदा उनले निकै सादगी जिवन बिताएकी छन् । उनका […]
काठमाडौ । दागंकी प्रमिला बुढामगरले जिवनमा यस्तो समस्या आउला भन्ने सोचेकी थिइनन् । फेसवुकमा भेटिएका रोल्पाका एक युवकसंग उनको दिनहुँ कुरा हुन थाल्यो । रोल्पाका कृष्णबहादुर बुढामगरसंग उनको दिनहुँ कुराकानी हुँदा उनीहरुको प्रेम बस्यो । उनले आफु अविवाहित भएको बताएका थिए । फेसवुकमा भेटिएका ब्यक्तिको त भरोसा हुँदैन तपाई विवाहित हुनुहुन्छ होला भनेर प्रश्न गर्दा […]
गत सेप्टेम्बर २५ का दिन दुबईमा आफ्नै श्रीमानले छु’री प्र’हा’र गरि श्रीमतीको ह’त्या गरेका छन्। बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विगत लामो समयदेखि यूएईमा कार्यरत चितवनकी गौंमायाँ मगर तामाङको गत २५ सेप्टेम्बर शुक्रबारका दिन बर दुबईमा बोलाएर आफ्नै श्रीमानले खु’लेआ’म सडकमा ह’त्या गरिएका हुन्। उनी एक भारतीयको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। श्रीमानले शुक्रबारको […]
October 8, 2020 News36mediaLeaveaComment on माईती हिडेकि मुनाकाे यस्तो दुःखद खबर, न माइत पुगिन् न कहिल्यै घर आउनेछिन्!(भिडियो)
इटहरी । माईती हिडेकी २५ बर्षीय अनिता (मुना) गिरी बतौलाको दुर्घटनामा मृ त्यु भएको छ । हेटौडा आफ्नो घरबाट काठमाण्डौ माईती हिडेकी मुनाको भिमफेदीको भिरबाट सुमो खस्दा मृत्यु भएको हो । उनी सँगै रहेको ३ बर्षीय सम्पूर्ण बर्लौला भने सामान्य घाईते भएका छन । दुर्घटनामा भान्जीको मृत्यु भएको उनका मामा टिकाराम पुरीले जनाएका छन । […]
October 8, 2020 News36mediaLeaveaComment on अमेरिकामा बैंक लुटपाट गर्दै गर्दा सम्राट लामा पक्राउ
अमेरिकामा बैंक लुटपाट गर्दै गर्दा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। मेरिल्याण्ड राज्यमा बैंक लुटपाट गर्दागर्दै ३० बर्षीय सम्राट लामा पक्राउ परेका हुन्। गेथसबर्गमा बैंक लुटपाट गर्दै गर्दा उनलाई पक्राउ गरेको मोन्टगोमरी काउन्टी प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकाबाट प्रकाशित नेपाली भाषाको खसोखास अनलाइनका अनुसार मंगलबार विहान १० बजेर २ मिनेट जाँदा बैंकका कर्मचारीले ९११ मा फोन गरेका […]
October 7, 2020 News36mediaLeaveaComment on कोरोनाबाट मृतक लाशको आँखा लगायतका अंग नै गायब भएको देखिएपछि हंगामा !
काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित मृतकको लाशलाई निक्कै ध्यान दिइन्छ । भाइरस फैलिन्छ भनेर निक्कै पटक प्लास्टिकले बेरिन्छ । तर भारतको इन्दौरको एक अस्पतालमा सबै चकित हुने खबर आयो । जहाँ कोरोना भाइरसबाट ८७ बर्षीय व्यक्तिको निधन भयो । लाशलाई अस्पतालले निक्कै दर्बिलोसँग प्याक गरेको थियो । तर लाश घरमा लाशलाई मुसाले कोतरिदियो […]
October 7, 2020 News36mediaLeaveaComment on काठमाडौंमा रहेका सर्वसाधारणलाई भर्खर आयो अत्यन्तै दुःखको खबर।
यो वर्ष काेराेना भाइरसकाे कारण मानिसहरु घर जान नपाउने भएका छन् । मिल्छ भने आज भोली मै काठमान्डू छोड्ने निर्णय लिनुहोस्,नत्र दशैं मा घर देखी टाढा रहन सक्ने यस खबरले बताउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे ईन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले यस वर्ष यथास्थानमा बसेर दशैं मनाउनुपर्ने बताएसँगै घर जान नपाइने भएकाे हाे । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री […]
दुःखद खबर; झापामा कोरोनाले दुई महिने शिशुको मृ,त्यु..
October 7, 2020 News36mediaLeaveaComment on दुःखद खबर; झापामा कोरोनाले दुई महिने शिशुको मृ,त्यु..
काठमाण्डौं । कोरोनाले एक शिशु लगेको छ । मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा कोरोना पुष्टि भएका कारण एक जना शिशुको ज्यान गएको हो । भद्रपुर–८ का दुई महिने शिशुमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको थियो । आफन्तले अस्पतालबाट शिशुको शव बुझेर घर लगेको तीन घण्टापछि कोरोनाको रिपोर्ट आएको थियो । शिशुमा निमोनियासँगै श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि मंगलबार बिहान […]
October 7, 2020 News36mediaLeaveaComment on विशेष के छ त भिडियोमा? जुन भिडियो ८० लाख बढीले हेरे भिडियो हेर्नुहोस्
पछिल्लो समय मानिसहरुमा भिडियो शेयरिङ मोबाइल एप टिकटकको लोकप्रियता बढी नै छ । छोटो भिडियो लि,प–सि,ङ्क सेयरिङ्ग एप टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभिन्न किसिमबाट बनाइएका टिकटक भिडियो तीव्र रुपमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइहाल्छन् ।यस्तै एउटा भिडियो अहिले भाइरल भएको छ । उक्त टिकटक भिडियोमा एक युवतीले नृ,त्यु गरिरहेकी हुन्छिन् । […]